Himalaya Dainik » धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि
त्यही समुद्रको किनारमा ‘दुबई मरिना एच क्लब’ छ । जहाँ ५ सय ५० भन्दा बढी सुविधायुक्त पानीजहाजलाई आकर्षक रूपमा पार्किङ गरी राखिएका छन् । जसमध्ये एउटा ‘मेजेस्टी ६१’ नाम गरेको डीपी २१७६ नम्बरको पानीजहाज छ । त्यसका २५ प्रतिशत मालिक हुन्, आकाश घिमिरे । नाम्जाङ सिदुवा–धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश कसरी विश्वस्तर क्लब मरिनाका सदस्य भए ? कसरी जहाजको मालिक बन्न पुगे त ? यसको कथा बुझ्न दुबई–कतारको १२ वर्षे दु:ख संघर्ष खोतल्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २७ श्रावण २०७६, सोमबार २०:३९